android ဖုန်းများအတွက် Manager ကို App ကိုဖိုင် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Manager က -File ရှာဖွေသူ, Junk သန့်စင်, Booster File
Manager က -File ရှာဖွေသူ, Junk သန့်စင်, Booster APK ဖိုင်
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုဖိုင်များ, စင်ကြယ်သော junk, ထပ်တိုးဖုန်းနှင့် antivirus ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသူများအတွက်, အလုပ်လုပ်တဲ့အသုံးဝင်သောအဆင်ပြေကိရိယာတခုဖြစ်တယ်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အသံ, apps များ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အမျှသင့်ရဲ့ဖုန်းအတွင်းရှိဖိုင်များကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှာဖွေ / browse နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါဖိုင်များ, ကူးယူ paste လုပ်ထားတဲ့, ပြောင်းရွှေ့, ဖျက်ပစ်, အမည်ပြောင်းနှင့်ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်အတူ compressed နိုင်ပါတယ်; ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်လည်း Junk Cleaner, ဖုန်း Booster နှင့်Antivirus.👍ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကအဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအစွမ်းထက်ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးကိရိယာတခုရှိသည်လိမ့်မယ်:
•အမျိုးအစား Browse ကို -, ရုပ်ပုံ, ဗီဒီယို၏ format နဲ့ Apk အသံဖိုင်များအားလုံးပြသရန်, Zip, Doc နှင့်စသည်တို့ကို .; သငျသညျ, Audio / Video play အမြင်ဓါတ်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်
•သိုလှောင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲ - internal storage ကို & SD ကတ်ကိုပံ့ပိုး directory ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးသင့်ရဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများစီမံခန့်ခွဲခြင်း, သင့်ဖုန်းရဲ့ storage ကိုသို့မဟုတ် sd ကဒ်များ၏အသုံးပြုမှုကြည့်ရှု, စီမံခန့်ခွဲ
•ဖုန်းနံပါတ် Booster - မှတ်ဉာဏ်သန့်စင်နှင့်အတူပြေးမြန်နှုန်းတိုးတက်စေူခင်း
•အတွက် Junk Cleaner - သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, ဖိုင်တွဲ; စကင်ဖတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးတပြင်လုံးကိုမိုဘိုင်းသိုလှောင်မှုအပိုအာကာသသိုလှောင်မှုရရှိရန် ပို. ဖိုင်သိုလှောင်မှု
• Antivirus - ကို malware သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုကနေသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုကာကွယ်ပါ
•လတ်တလောဖိုင်များ - သင်မကြာသေးမီကလက်ခံရရှိအားလုံးဖိုင်တွေစာရင်းပေါက်ပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်
• APP / APK ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် - သင့်စက်ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ APP / APK ကိုဖိုင်များကိုစီမံ
• FTP ကို ​​- သင်သည်သင်၏ PC ကိုကွန်ပျူတာကတဆင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ file တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အဘို့အလြယ္ကူ
•အနှစ်သက်ဆုံး - သင်အကြိုက်ဆုံးနှင့်အတူဖိုင်အထိမ်းအမှတ်နှင့်ရှာတှေ့နိုငျ / မန်နေဂျာကိုအလွယ်တကူနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကို
• Device ကို Analyze - ကပိုကောင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲ / သိရန်သင်၏ဖုန်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောဖိုင်အမျိုးအစား၏အချိုးအစား Analyze
•ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာရန် - လျင်မြန်စွာသော့ချက်စာလုံးတွေနဲ့ဖိုင်တွေရှာတွေ့
• Strong Box ကို - သင့် privacyIn တဦးတည်းဝါကျကာကွယ်ပေးရန်ဆိုဖိုင်တွေဖွင့်သော့ခတ်, ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကဖိုင်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်, သန့်ရှင်း junk, ထပ်တိုးဖုန်းနှင့် antivirus ကို
❤️သင့်မှတ်ချက်များနှင့် rating, ကျေးဇူးတင်စကားအထောကျအကူများမှာ!
Manager က -File ရှာဖွေသူ, Junk သန့်စင်, Booster File
5.90 ကို MB
အလှအပ Apps ကပစတူဒီယို